स्वास्थ्य समाचार अपडेट - Page 47 of 113 - Koshi Online
कुन समयमा कस्तो फलफूल खाने ?
१६ फाल्गुन २०७३, सोमबार १०:४०
काठमाडौं, १६ फागुन । फलफूल दिनमा जतिबेला पनि खान सकिन्छ भन्ने गलत अवधारणा छ । तर विज्ञहरुका अनुसार फलफूल खाने निश्चित समय हुनुपर्छ । उच्च क्यालोरीयुक्त फलफूल बिहानै खानु उपर्यक्त हुन्छ, ताकी तपाईले विशेष जोशका साथ दिनको सुरुवाता होस् । तर…
तपाईलाई पनि ढाड दुख्ने समस्या छ ?
१६ फाल्गुन २०७३, सोमबार ०९:५४
काठमाडौं, १६ फागुन । पछिल्लो समयमा ढाड दुख्ने समस्या हुने ब्यक्तिहरुको संख्या बढ्दै गएको छ । हाम्रै दिनचर्याले पनि ढाड दुख्ने समस्या आम बन्दै गएको बताउँछन् विशेषज्ञहरु । यदि तपाइँलाई पनि ढाड दुख्ने समस्या छ भने लापरवाही नगर्नुस् ।…
यौन सम्बन्धलाई लिएर चिन्तित हुनुहुन्छ ? एकपटक यो पढ्नुहोस्
१६ फाल्गुन २०७३, सोमबार ०९:४७
काठमाडौं, १६ फागुन । सेक्सको बारेमा असहज हुँदा अनि तनाव लिदाँ सेक्सको समयमा दुखाइको कारण बन्न सक्छ । एक नयाँ खोज अनुसार हरेक दश महिलामध्ये एकले सेक्सको क्रममा दुखाई अनुभव गर्छन । रोयल कलेज अफ अब्सटेट्रीशियस र गाइनोकोलोजिस्टसकी एडी मोरिस…
आंखाको तेज बढाउन यस्ता घरेलु उपाय अपनाउनुहोस्
१६ फाल्गुन २०७३, सोमबार ०९:२७
काठमाडों, १६ फागुन । लगातार घण्टौसम्म काम गर्नाले, निद्रा पुरा भएन भने तथा धेरैबेर सम्म मोवाइल कम्प्युटरमा बसिरहनाले आँखा कमजोर हुदै जान्छ । आखा कमजोर भएपछि सानै उमेरमा देखि चस्मा लगाउनु पर्ने बाध्यता हुन्छ । तर आयुर्वेदका यस्ता केहि…
खुट्टा खप्टिएर बस्ने बानी छ ? सावधान
१५ फाल्गुन २०७३, आईतवार १०:४०
काठमाडौं, १५ फागुन । कुर्सीमा बस्दा एउटा खुट्टा अर्काे खुट्टामा खप्टिएर लामो समय बस्नु स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले गलत भएको एक अध्ययनले देखाएको छ । यसरी बस्दा शरीर स्वभाविक अवस्थमा नरहने भएकाले स्वास्थ्यमा समस्या देखिन सक्ने बताइएको छ ।…
पिसाब गर्दा यसकारण पोल्छ
१५ फाल्गुन २०७३, आईतवार १०:३७
काठमाडौं, १५ फागुन । मानव शरीरका सम्पूर्ण विकारहरु बाहिर निकाल्ने जम्मा दुई उपाय छन् । एउटा पित्तबाट र अर्काे मुत्रनलीबाट । मुत्रनलीबाट निस्किने पिसाबले हाम्रो शरीरका सबै प्रकारका नचाहिने तत्वलाई बाहिर निकाल्छ । तर, पिसाबमै खराबी आउँदा वा…
स्विमिङ गर्दा हुन्छन् यस्ता फाईदा
१५ फाल्गुन २०७३, आईतवार १०:०५
काठमाडौं, १५ फागुन । पौडिनु स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायक मानिन्छ । पौडिनुले शरिर सुगठित समेत हुन्छ । पौडँदा हात–खुट्टाको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । पौडिनु मनोरञ्जन पनि हो भने स्वास्थ्यको दृष्टीले पनि लाभदायक हुन्छ । कयौ हेल्थ क्लब,…
काफल खानुका फाईदाहरु यस्ता छन्
१५ फाल्गुन २०७३, आईतवार ०९:४३
काठमाडौं, १५ फागुन । काफल एक लोकप्रिय पहाडी फल हो । यो गर्मी याममा पहाडका वन पाखाहरूमा पाकेको हुन्छ । यसको फलको आकार लाम्चो र गोलो आकारको हुन्छ। यसको स्वाद अमिलो मिठो हुन्छ। यसको फलको रंग काँचोमा हरियो हुन्छ । पाकि सकेपछी रातो र धेरै…
कण्डमको प्रयोग गर्दा यी यौन रोगबाट भने बच्न सकिँदैन
१५ फाल्गुन २०७३, आईतवार ०९:२५
काठमाडौं, १५ फागुन । यौनसँग जोडिएका रोगबाट बच्न कण्डमको प्रयोग गरिन्छ, तर कण्डमले बचाउँन नसक्ने यौनरोग पनि छन् भन्ने सायद तपाईलाई जानकारी नहोला । सावधान रहन जान्नुस् कुन–कुन रोग छन् जसलाई कण्डमले बचाउन सक्दैन । १. हर्पिस् – यदि कुनै…
यसकारण खाना खाने वित्तिकै पानी पिउनु हुँदैन
१४ फाल्गुन २०७३, शनिबार १०:१४
काठमाडौं, १४ फागुन । आयुर्वेदका अनुसार खाना खानासाथ पानी खानु हानिकारक हुन्छ । आयुर्वेद भन्छ भोजन गर्ना साथ पानि पिउनु विष समान हो । खाना खानासाथ पानी पिउँदा पाचन प्रक्रियामा पर्छ र यसले नकारात्मक भूमिका खेल्छ । हामीले खाना खाने समयमा…